Home / Foset Guide / Etu ị ga - esi ahota ezi mmiri maka bekee gị
2020 / 11 / 16 nhazi ọkwaFoset Guide 4273 0
Okpuru bekee nwere obi agbachapụla ọkwa gị, mana dịka ụlọ ịsa ahụ bụ otu akụkụ nke ụlọ gị ị na-eji kwa ụbọchị, ọ bara uru iwepụta oge na mbọ gị ịchọpụta ndị ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ kachasị nke ọma na imewe ime gị na ndụ. Ma ị na-arụzigharị ụlọ ịsa ahụ niile ma ọ bụ na ị na-agbanwe atụmatụ ọhụụ, ịpị ị na-ahọrọ maka efere gị nwere ike ime ka ọ pụta ìhè na nsonaazụ emere. Tinye ego n'amamihe, gbakwunyere na ha kwesịrị ịdịru ogologo oge maka ọbịbịa. N'ebe a, ndị ọkachamara atọ gosipụtara ndụmọdụ ha kachasị elu banyere otu esi enyere aka ime nhọrọ ziri ezi.
Mara nke gi igwekota taps ire ere online
1 Ogidi osisi
Ọtụtụ mgbe n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, ịpị mmiri na-abịa abụọ abụọ ma nwee otu aka maka mmiri oyi na onye ọzọ maka ọkụ. N'ịbụ nke ndị na-agbagharị agbagharị na-anagide ma ọ bụ na-atụgharị anya, ogidi mmiri na-achọ oghere ọkpọkọ abụọ na bezin ahụ.
2 Monobloc ọkpọkọ
Adabara efere nwere otu aka ọdịiche, a monobloc aka atụmatụ a otu spout na-enye ihe agwaogwa nke na-ekpo ọkụ na mmiri oyi. Dịka ị pụrụ ịhụ ebe a, etinyere njikwa mmiri n'ime ahụ gị nke na - emetụ, na - ewepụta amamịghe, nchekwa ohere. Ọ bụrụ n’ịchọrọ idobe bezin gị nke ọma, ị ga - enwe ike ịrịgo ugwu gị.
3 Mgwakota agwa
Dị ka ọfufu nke monobloc, ọkpọkọ igwekota na-eweta ngwakọta nke mmiri ọkụ na mmiri oyi site na mmiri ọ bụla. N'adịghị ka mmiri mmiri monobloc, agbanyeghị, ndị na-agwakọta ihe ekewaala ntọala mmiri. Ndị nwe ụlọ ịsa ahụ na-ahọrọ ọkpọkọ igwekota atọ, na-egosipụta ihe dị iche iche maka mmiri ọkụ na mmiri dị jụụ. N'aka nke ọzọ, lelee maka mgbata igwe na-agwakọta oghere abụọ, nke otu njikwa na-achịkwa.
N’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ịkwa ahụ ụlọ ịsa ahụ ọ bụla, ọkpọkọ ndị ahụ bụ ọla okpueze. A na-enweta ya n'ọtụtụ usoro ọgụgụ na ịmechasị, ọbụlagodi obere ụgbọ mmiri na-efu obere ego nke ụwa dị ugbu a. Tinye na nhọrọ maka mmekọrịta na nchekwa mmiri nkịtị, ụlọ mposi nke oge a na-enye ndị nwe ụlọ ihe ọ bụla dị mma.
Tupu ị na-ahọrọ pọmpụ ụlọ ịsa ahụ, ị ​​ga-eleba anya n’ihe ole na ole, dị ka ma ị̀ na-eji ebe a na-asa ahịhịa eme ihe ma ọ bụ na ị na-azụ nke ọhụrụ, ebe a ga-emepe oghere. I nwekwara ike ịtụle atụmatụ ndị ịchọrọ, yana ego mgbata ego gị na-enye gị ohere. Ndị ọzọ echiche bụ nha nke ime ụlọ ịwụ gị na ụdị ụdị ọkpọkọ na-abụkarị n'ime ụlọ ndị yiri ya.
Ọ bụrụ n ’ị na-edozigharị eriri mmiri ọhụrụ na ọdụ mmiri dị ugbu a ma ọ bụ na-azụta mkpokọ mmiri zuru ezu, jide n’aka na ị ga-adaba n’ụdị ọkpọkọ ahụ na oghere oghere gị.
Single-fosets mejupụtara spout na mixgwakọta ịlesụ-mgbe otu lever-n'ime otu ngwaahịa na-achọ naanị 1 gbapuru sink ọdịiche. Maka retrofits, ụfọdụ ụdị na-agbakwunye efere akụkụ ala nke na-ekpuchi oghere oghere atọ dị. Otu-fosets na-adabara obere sinks, dị ka ntụ ụlọ baths. Mfe ha dị mfe na-egosipụta nghọta nke oge a.
Ebe a na-etinye pọmpụ ndị e mere n’etiti ihe n’ụzọ dabara adaba n’ebe atọ nwere oghere (nwere oghere nwere oghere awụnyere 4 sentimita asatọ iche). Ha ga-enwe ma ọbụ ụkwụ abụọ ma ọ bụ ejiri aka abụọ n’elu efere 6-anụ ọhịa. Ha dabara adaba maka ọtụtụ ebe ịsa ahụ.
Mgbasa agbasa nwere ihe atọ dị iche iche: ejiri aka abụọ na spout. Typicaldị ọdịiche dị n'etiti aka na-eru sentimita asatọ, akụkụ atọ ahụ nwere ọchịchọ ibu karịa ụdị ọkpọ mmiri ịsa ahụ ndị ọzọ. A na-eme nsụgharị ndị pere mpe, nke a na-akpọ minispreads, maka oghere ndị a tụrụ agba dị sentimita 8 iche.
Mgbidi ọkpọ mgbidi ejiriwo ewu ewu na freestanding ma ọ bụ ụdị mmiri nke na-achọ ka ọ dị ogologo nke gafere karịa nke kachasị ama nke nnukwu efere ahụ.
Echekwala na ọkpọkọ ọkpọ ọkpọ mmiri nwere ike ịkekọrịta ngwa ngwa. Dịka ọmụmaatụ, Kohler na-arụ otu pọmpụ nke etinyere na kọlọl na-arụ ọrụ na mgbidi. Ihe ọ bụla ị hụrụ bụ ntakịrị ijegharị mmegharị ahụ na-apụta site na ala nke enyo gị.
Ozi ọma ahụ: N'ime ịnụ ọkụ n'obi ha iji weta ngwaahịa ọhụrụ n'ahịa, ndị na-emepụta ihe nrụpụta emepụtala nhọrọ ndị ọzọ karịa ka Sweetheart Gaga nwere ejiji. N'ihi ndị na-ekiri uwe na-acha ọcha na-acha ọcha n'oge a, ọbụlagodi ọkpọkọ ndị na-adịchaghị ọnụ nwere ike ịnya isi na akwụkwọ ikike oge niile maka imecha ha.
Ozi ọjọọ ahụ: You'll ga-ahọrọ site na iji uche gị na-atụgharị uche nke ohere dị iche iche nke gụnyere chrome polished (ụlọ ọrụ dị ogologo oge), chrome chrome, nickel na-egbu maramara, nickel ahịhịa, nickel emechara, igwe anaghị agba nchara, ọla kọpa, ọla nchara , ọla kọpa, ọla kọpa, nwa, ọcha na serami mara mma.
Ka anyi ghara ileghara ọla ọcha anya, nke taa enwere ike iwere ka itinye ego ya na ihe icho nma.
Ọ bụrụ na nhọrọ ndị ahụ na-enye gị nnukwu ibu ọrụ, gbalịa mee mkpebi ndị a:
Ichefu ihe ma tinye uche na anya. Gaa ebe ngosi ebe a na-egosipụta ihe niile emechara, wee họrọ onye bụ isi nke ị hụrụ n'anya nke ukwuu.
Na-ahazi ihe niile ị na - emecha n'ime ime ụlọ ịwụ ọ bụla nke pụtara na ebe siri ike gị - gụnyere akwa nhicha ahụ, ihe ọkụ ọkụ na ngwaike ọnụ ụzọ nwere otu imecha.
Emechachachachachachachacha ihe nke ọma ma ọ na-achọ nlekọta oge iji mee ka ha na-ele anya
Ihe nchachachacha mma dị mma na izobe ntụpọ mmiri na mkpịsị aka, nke magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka
Ime ụlọ ịsa ahụ: IHE I Kwesịrị Knowmara
Athlọ ịsa ahụ Foset Nhọrọ
Ime ụlọ ịsa ahụ nhọrọ
Lọ ịsa ahụ ịsa ahụ na ihe eji eme ihe
Ụlọ ahụ na-asa ákwà
Ime ụlọ ịwụ Isi
Granite naa ụlọ ịwụ
Omuma asa naa fosets
Molọ mposi Ime ụlọ Sinks
Ime ụlọ ịwụ Lighting Ideas
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ọtụtụ atụmatụ a na-elekwasị anya na spout, na mmeghe na-adịbeghị anya gụnyere spouts na-ebute mmiri nkịtị site na ọkpọkọ dị warara, na-emeghe oghere na-agagharị na site na eriri-coaster curves. Ihe eji akpachapu agbaghari si na kichin abanye na ime ụlọ ịwụ ahụ, ma eleghị anya nke pụtara na ịkwesighi ịgagharị ezé ezé gị gaa iyi ahụ.
Nke gara aga :: Kacha mma foset na-eduzi Osote: Etu ị ga-esi họrọ igwe mmiri kwesịrị ekwesị
2020 / 12 / 21 5078
2020 / 11 / 19 4381
2020 / 11 / 18 4279